✈️DOWNLOAD Boeing KC-135 Stratotanker Package FSX & P3D - Rikoooo
Boeing KC-135 Stratotanker ngwugwu FSX & P3D
downloads 14 539
Ihe ngwugwu zuru ezu maka FSX/ SP2 (nke Rikoooo nwalere ma kwekọọ na ya Prepar3D v4.5) na VC panel zuru ezu, yana kompeni boom. Kachasị anya n'ihi na ọtụtụ na-aga n'ihu na-egwu egwu, na eserese igwefoto maka mmanụ ọkụ ariel. Nwere boom mmanụ ụgbọ mmiri ọkọlọtọ, igbe nwere mgbakwunye drogue, yana sistemụ MPRS na ihe R. Nwere ike ikwu ịgbakwunye In-Flight Refueling Gauge maka FSX by Andy Niko na Jivko Rusev gaa ụgbọ elu kachasị amasị gị.
Boeing KC-135 Stratotanker bụ ụgbọelu agha ụgbọelu. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke mbụ ụgbọelu US Air Force na-anọchi anya KC-97 Stratotanker. Dịka nwa nwanne ya, Boeing 707, KC-135 sitere na Boeing 367-80 jet, nke a na-akpọkarị "Dash-80". A na-ebute ya na mbụ ịmalite ịmalite ịmalite ịmị bọmbụ ma jiri ya rụọ ọtụtụ agha na Vietnam na agha ndị ọzọ dịka Desert Storm iji mee ka ndị agha na ndị agha na-atụ egwu na ndị agha bọmbụ. Ije ozi na United States Air Force kemgbe June 1957, KC-135 ikpeazụ nyere na Air Force na 1965.
Ihe niile KC-135 na-eji na Pratt & Whitney J-57-P-59W turbojet engines. Na 1980, usoro mmemme mbụ gbanwere 157 tankers na Pratt & Whitney TF-33-PW-102 turbofan engine. Onye ọrụ tankị ahụ gbanwere, nke a kpọrọ KC-135E, bụ 14% karịa mmanụ ọkụ karịa KC-135A. Usoro nke abụọ gbanwere ihe ngosi 500 nke ọhụrụ na CFM56. Onye ọrụ tankị ahụ gbanwere, KC-135R (gbanwere KC-135A ma ọ bụ E) ma ọ bụ KC-135T (gbanwee KC-135Q), bụ 25% karịa mmanụ ụgbọ ala karịa nke ndị ọrụ mbụ.
Onye edemede: Gary D. Shetter III